China Vented Seal Liner ifektri kanye nabaphakeli | 品牌 名 / 公司 名
Uphawu olungenisiwe lwenziwe ngefilimu ephefumulekayo kanye ne-Heat induction seal (HIS) ngokusebenzisa i-ultrasonic noma i-hot melt welding, efezekisa ngokuphelele umphumela we "breathable and no leakage". Uphawu olunezikhala lunomklamo olula, ukuvunyelwa komoya okuhle kakhulu nokumelana okuhle nabasebenza ngokusebenza komoya. Lo mkhiqizo wenziwa ukuvimbela isitsha sokugcwalisa (ibhodlela) ukuthi singanyakaziswa noma sibekwe emazingeni okushisa ahlukahlukene ukukhiqiza igesi ngemuva kokugcwalisa uketshezi oluthile, ngaleyo ndlela kubangele ukuthi isitsha sikhubazeke noma ikepisi lebhodlela liqhekeke.
I-liner ekhonjiwe ingukusebenza okuhle kokuhamba komoya embonini, izinketho eziningi zokubonisa ukufeza zifeza izidingo ezahlukahlukene zokusebenza. Ihlinzekwa ngocezu olulodwa lwe-foam noma i-wax encane eboshwe ku-pulp.
I-Vent liner ilungele i-PET, i-PVC, i-PS, i-PP, i-PE… amabhodlela epulasitiki namabhodlela engilazi, futhi isetshenziselwa kakhulu ukudla, izimonyo, imithi yokwelapha, imishanguzo yokubulala izinambuzane, amakhemikhali, ukupakisha kwemikhiqizo yempahla.
Impahla eluhlaza: Ikhadibhodi + Aluminium Ucwecwe + Ifilimu yePulasitiki
Ubukhulu obujwayelekile: 0.2-1.2mm
Ulwelwesi olungena emoyeni olulinganisa ingcindezi futhi luvimbele iziqukathi ekuqhumeni, ekuweni noma ekuvuza.
Idizayini eyingqayizivele yokufaka emaphephandabeni ihlangana kalula ngokufakwa ngesandla noma okuzenzakalelayo.
Ububanzi obuningi bobukhulu be-vent nezinto ezilungele ukusetshenziswa ezithuthukisa iphakheji ngaphandle kokuhlelwa kabusha.
1. Ukuphefumula futhi akukho ukuvuza
Langaphambilini I-Foam Liner
Olandelayo: I-3-Ply Foam Liner